တနိုင်တပိုင်ရေသန့်စင်ခြင်း-၂ (နေရောင်ခြည်ဖြင့်ရေကိုပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်း) – Oakkar7's Blog
On August 17, 2015 August 17, 2015 By oakkar7In biosand filter (ဇီဝသဲရေစစ်), Green Energy Myanmar, SODIS Myanmar
ဤလမ်းညွှန်အား Download ရယူရန် Download Link နေရောင်ခြည်ဖြင့်ရေကိုပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်း(SODIS_Myanmarv1.1)
ဤလမ်းညွှန်စာတမ်းအား ခြောက်သွေ့အပူရှိန်ပြင်းထန်၍ သောက်သုံးရေ ရှားပါးသော ဒေသများ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်၍ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲဖြစ်နေသောဒေသများ တွင် ရပ်ရွာပြည်သူလူထု အခြေ့ပု တနိုင်တပိုင် ရေသန့်စင်ခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထုတ်ဝေပါသည်။
ရေးသားရာတွင် ဇီဝသဲရေစစ်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာလက်စွဲ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် EAWAG (Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology) ၏ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် SANDEC (Department of Water and Sanitation in Developing Countries) နှင့် အခြားပူးပေါင်းသုတေသန အဖွဲ့များမှ ထုတ်ဝေသည့် နေရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြု၍ ရေကို ပိုးမွှားသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် (SOLAR WATER DISINFECTION A GUIDE FOR THE APPLICATION OF SODIS) နှင့် နေရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြု၍ ရေကို ပိုးမွှားသန့်စင်မှုဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရေးလက်စွဲ (Training Manual for SODIS Promotion) စာအုပ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားအင်တာနက်မှ ကောင်းနိုးရာဝက်ဆိုဒ်များ၊ စာတန်းများအပေါ်တွင်အခြေခံပြီး လွယ်ကူ ရှင်းလင်းသော ဒေသဘာသာစကားဖြင့် လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေးသားထားပါသည်။
အပိုင်း(၁) တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သော ဇီဝသဲရေစစ်( Biosand Filter) နှင့် ယခု နေရောင်ဖြင့်ရေကိုပိုးသတ်ခြင်း (SODIS) နည်းလမ်းနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်၊ ရပ်ရွာပြည်သူလူထု အခြေ့ပု အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် တနိုင်တပိုင် စီမံကိန်းများအဖြစ် ဖြန့်ဝေပေးကြပါရန် နှင့် ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များအနေ ဖြင့်လည်း အမှားအယွင်းများရှိက ထောက်ပြကြပါရန်၊ အကြံပြုချက်များ ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ရေကိုအနယ်ထိုင်၊ ရေစစ်နည်းတမျိုးမျိုးနှင့် စစ်ပြီးလျင် စစ်နည်းအလိုက် ၃၀% မှ ၉၈% ထိပိုးမွှား သန့်စင်သော ရေကို ရရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်၊ ဤရေသည် သုံးရေအတွက် သင့်တော်သော်လည်း သောက်သုံးရေအတွက်မူ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ သတ်မှတ်ချက်မှာ ၁၀၀% ပိုးမွှားကင်းစင်ရမည် ဖြစ်၍ ထပ်မံ ပိုးမွှားသန့်စင်ရန် လိုအပ် ပါသည်။ ပိုးမွှားသတ်ခြင်းအတွက် သမားရိုးကျအားဖြင့် အောက်ပါနည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၁) ကလိုရင်းကဲသို့သော ရေသန့်ဆေးများ ခတ်ခြင်း
ကလိုရင်းကဲ့သို့သောဆေးခတ်ခြင်းမှာ ရေ၏ အနံ့အသက်ကို ပြောင်းလဲစေခြင်း၊ ချက်ခြင်းသောက်မရခြင်း စသည့်အားနည်းချက်များရှိပြီး ဆူပွက်အောင်ကြိုချက်ခြင်းမှာလည်း ပြင်းထန်သော အပူချိန်ကိုပင်မမှုသည့် ပိုးမွှားများရှိခြင်း၊ လောင်စာအသုံးပြုရခြင်း စသည့်အားနည်းချက်များ ရှိနေပြန်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီပြီး အလွယ်တကူ အသုံးချနိုင်သည့် နည်းလမ်းကို တင်ပြပါမည်။
(၂) နေရောင်ခြည်ဖြင့် သောက်သုံးရေကို ပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်း (Solar Water Disinfection)
“နေရောင်ခြည်” မှန်ပါသည်၊ နေရောင်ခြည်သည် လူသားတို့မိတ်ဆွေဖြစ်သလို မြန်မာပြည်သည်လည်း နေရောင်ကို တစ်နှစ်ပါတ်လုံး တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် တော်တော်များများတွင် ရရှိသော တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါသည်၊ ဆိုလာဟုဆို၍ ဆိုလာ ပါဝါပြားများကို ပြေးမြင်ကာ ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေး နည်းပညာမြင့်မားကာ ကုန်ကျစရိတ် များပြားမည့် အရာဟု မထင် စေလိုပါ၊ မယုံကြည်နိုင်အောင် ရိုးရှင်းကာ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီက မြန်ပြည်တလွှား အပူချိန်မြင့်မားကာ သောက်သုံးရေ ပြတ်လတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်၊ ပြင်းထန်လှသော နေရောင်နှင့်အတူ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အညွှန်းကိန်း (Ultraviolet Index) မြင့်တက်လာမှုကြောင့် သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါသည်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အား ရေသန့်စက်ရုံများတွင် ရေသန့်အား ပိုးမွှား သန့်စင်ရန် အတွက် အသုံးပြုကြပါသည်၊ နေရောင်ခြည်တွင်ပါဝင်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် ပိုးမွှား သန့်စင်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်လား အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေကြည့်ရာမှ နေရောင်ခြည်ဖြင့် သောက်သုံးရေကို ပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်း (Solar Water Disinfection or SODIS) နည်းလမ်းကို တွေ့ရှိပါသည်၊
မသန့်ရှင်းသောရေတွင် မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သော ရေပျော်ပိုးမွှားများ (Pathogen, bacteria, viruses, protozoa and worms) ပါရှိပါသည်၊ ရေတွင်ပါဝင်သော ပိုးမွှားအချို့မှာ လူကိုဒုက္ခမပေးနိုင်သော်လည်း အီကိုလိုင် (Ecoli) ကဲ့သို့သော ပိုးမွှားများမှာမူ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခပေးနိုင်ပြီး အချို့ပိုးမွှားများမှာ မြင့်မားသောအပူချိန်မှာပင် ဖယ်ရှားရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။
နေရောင်ခြည်ဖြင့် သောက်သုံးရေကို ပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်း (SODIS)သည် အပူဖြင့်ရေကို ပိုးမွှားသတ်ခြင်း (Thermal Water Disinfection) နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဖြင့် ပိုးမွှားသတ်ခြင်း (UV Light Water Treatment and sterilization) နည်းလမ်းနှစ်ခုကို အကျိုးရှိစွာ ပေါင်းစစ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ နေရောင်ခြည်မှ ပြင်းထန်သော အပူရှိန်သည် ရေကို အပူပေးနိုင်ပြီး နေရောင်ခြည်တွင် ပါဝင်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (Ultraviolet A or UV-A) သည် ရေတွင်ပါဝင်သော ပိုးမွှားများ က်ို တားဆီး၊ ဖယ်ရှား ပယ်သတ်နိုင်ခြင်း မှာသဘာဝ ကပေးသော အပူပိုင်းဒေသများအတွက် လက်ဆောင်ပင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
SODIS ကို ProfessorAftim Acra က လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၊ ဘေရွတ်မြို့ ရှိ American University of Beirut တွင် ကျေးရွာစွမ်းအင်အဖွဲ့အစည်း(Integrated Rural Energy Systems Association (INRESA) နှင့် ပူးတွဲစီမံကိန်း တစ်ခုအဖြစ် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ အနုဇီဝပညာရှင်များ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပညာရှင်များ စသည်ဖြင့်ပါဝင်သော EAWAG/ SANDEC ပူးပေါင်း သုတေသနအဖွဲ့များသည် ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသတ်မှုများ၊ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းစမ်းသတ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး လက်တွေ့ကျ၍ ထိရောက်သော၊ သဘာဝနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသော SODIS နည်းလမ်းကို ၁၉၉၁ တွင် ထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါသည်။
SODISသည် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက တနိုင်တပိုင် ရေသန့်စင်ခြင်း အတွက် ထောက်ခံချက်ပေးထားပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်များစုတွင် (အာဖရိက နှင့် သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ် စသည့်အာရှနိုင်ငံများ) အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ ဆွစ်ဇာလန်အခြေပြု The Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (EAWAG) သည် Department of Water and Sanitation in Developing Countries (Sandec) နှင့် ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံပေါင်း ၃၃ နိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၅ သန်းအတွက် SODIS စီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ မြှင့်တင်အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ပါသည်။
ပုံ-၁ SODIS ကို အကောင်ထည်ဖေါ်အသုံးပြုခဲ့သောနိုင်ငံများ
၂.၂ SODIS အလုပ်လုပ်ပုံ
EAWAG သုတေသန အဖွဲ့သည် ရေအပူချိန်နှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းကြားတွင် နှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုအကျိုးရှိသော ရလာဒ်များရရှိနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ရေကို ၅၀° ဆဲလ်စီယပ် ထိအပူပေးထားလျင် ၃၀° ဆဲလ်စီယပ် အပူချိန်တွင် ပေးသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပမာဏ၏ ၁/၄ မျှသာပေးရုံမျှဖြင့် တူညီသော ပိုးမွှား (Fecal coliform ) အရေအတွက်ကို ပယ်သတ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
SODIS နေရောင်ဖြင့်ရေကိုပိုးသတ်ခြင်း နည်းလမ်းတွင် အဓိက လိုအပ်ချက်နှစ်ခုရှိသည်။
ပထမအချက်မှာ ရေကို နေရောင်ခြည်တွင် တိုက်ရိုက် ၇၀° မှ ၇၅° ဆဲလ်စီယပ်ထိ အပူပေးရန် လုံလောက်သော နေရောင်ခြည် နှင့် အချိန် ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ နေရောင်တွင်ပါဝင်သည့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV-A) ဖြစ်ပါသည်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV-A) သည် ရေတွင်ပါဝင်သော လူကိုအန္တရယ်ပေးနိုင်သော ပိုးမွှား (pathogens) များကို သေစေနိုင်သော စွမ်းအားရှိသည်။
ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV-A)သည် ရေတွင်ပါဝင်သော အောက်စီဂျင်ကို ဓါတ်ပြုပြီး တုံ့ပြန်မှုကောင်းသော အောက်စီဂျင်ဓါတ်ပေါင်း (oxygen free radicals and hydrogen peroxides)ကို ထွက်ပေါ်စေပါသည်၊ ထို အောက်စီဂျင်ဓါတ်ပေါင်းမော်လီကျူးများသည် သက်ရှိဆဲများ၏ ဖြစ်တည်မှုကို ဟန့်တားနိုင်ပြီး လူကိုအန္တရယ်ပေးနိုင်သော ပိုးမွှား (pathogens) များကို ပျက်စီးနိုင်သောစွမ်းအားကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
၂.၃ SODIS ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
သောက်သုံးရေ၏ ရောဂါပိုးမွှားပါဝင်မှုကို မရှိသလောက် ဖြစ်အောင် ဖယ်ရှားပယ်သတ်ပေးနိုင်ပြီး အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း
အလွယ်တကူရရှိသော အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
ပုံ-၂ နေရောင်ခြည်ဖြင့် ရောဂါပိုးမွှားသတ်ခြင်း
၂.၄ SODIS အတွက်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ
အခြေခံနည်းလမ်းမှာ မယုံနိုင်အောင်ရှင်းလင်းပြီး မထင်မှတ်အောင် အကျိုးကျေးဇူးမှာ များပြားပါသည်၊ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများမှာ –
ကြည်လင်သောရေ၊ ၃၀ NTU ရှိရေ (Nephelometric Turbidity Units – ရေ၏ကြည်လင်မှုကို တိုင်းတာသောယူနစ်)
ကြည်လင်သောရေသန့်ဘူးအခွံ (PolyEthylene Terephtalate or PET) (မြင်တွေ့နေကျ ၁ လီတာ ဝင်ရေသန့်ဘူး အကြည်)
တောက်ပသော နေရောင်ခြည် တို့သာဖြစ်သည်။
သန့်စင်လိုသောရေမှာ ကြည်လင်သောရေ ဖြစ်ရန်လိုပါသည်၊ ရေနောက်များ ဖြစ်ပါက အပိုင်း(၁) တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သော မြေဆွဲအားဖြင့်ရေစစ်ခြင်း၊ ဇီဝသဲရေစစ်( Biosand Filter) စသည့် နည်းလမ်းတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဦးစွာ စစ်ရန်လိုပါသည်၊ ရေကြည်လင်နေမှဖြင့် စစ်ရန်မလိုဟု ယူဆနိုင်ပါသည်၊ ရေအမြင်အားဖြင့် ကြည်လင်နေသောလည်း ရေအရင်းအမြစ် မသန့်ရှင်းလျင် မမြင်နိုင်သော ပိုးမွှားများ ပါရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်နေသော်ရေသည် အနယ်များ၊အမှုံအမွှားများ၊ အော်ဂဲနစ်ဓါတ်ပေါင်းများ ရေတွင်ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်၊ သဘာဝအားဖြင့် နောက်နေသောရေသည် ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရိုက် မထိခိုက်စေပါ၊ သို့သော် အနယ်များ၊ အမှုံအမွှားများ သည် ရေတွင်ပျော်သော ရောဂါပိုးမွှားများ၏ ခိုအောင်းရာဖြစ်သဖြင့် နောက်ကျိသောရေ သည် ရောဂါပိုးမွှားကို ပိုမိုအားပေးခြင်းပါသည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် နောက်ကျိသောရေသည် နေရောင်ဖြတ်သန်းမှုနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဓါတ်ပြုမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးသဖြင့် ရောဂါပိုးမွှားဖယ်ရှားရာတွင် ထိရောက်မှုမရှိခြင်း ကြောင့်တတ်နိုင်သရွေ့ ကြည်လင်သောရေကို သာ SODIS နည်းလမ်းတွင် အသုံးပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။
ရေ၏ကြည်လင်မှုကို အဲန်တီယူ NTU (Nephelometric Turbidity Units) ဖြင့်တိုင်းတာနိုင်ပါသည်၊
ပုံ-၃ ရေ၏ကြည်လင်မှုကို အဲန်တီယူဖြင့် နမူနာပြပုံ
စမ်းသတ်မှုကို အိမ်အတွင်း ပုံမှန်အလင်းရောင် တွင်သာ လုပ်ပါ၊ နေရောင်အောက်တွင် မလုပ်ပါနှင့်။
ကြည်လင်သော ကြည်လင်သောရေသန့်ဘူးအခွံ(သို့) ဖန်ပုလင်းအလွတ်တစ်လုံး ထဲတွင် သန့်စင်လိုသော ရေကို အပြည့်နီးပါဖြည့်ပါ။
ပုံ-၄ တွင်ရှိသော လိုဂိုကို ပရင့်ထုတ်၍ ပုလင်းအောက်ခြေတွင် ထားပါ။
ပုံ-၅ အတိုင်း ရေပုလင်းအပေါ်မှ အောက်ခြေ စာရွက်ကိုကြည့်ပါ။
ရေပုလင်းအပေါ်မှ အောက်ခြေ စာရွက်ကိုကြည့်ပါ။ ရေစက်နှင့် လိုဂိုမှ နေရောင်ဖြာထွက်နေသော လိုင်းစင်းများကို ဖတ်၍ရပါက ရေ၏ကြည်လင်မှုသည် ၂၀ အဲန်တီယူ အောက်တွင်ရှိပြီး ရှိပြီး SODIS နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
“sOdis” စာသားကို ဖတ်၍ရပါက ရေ၏ကြည်လင်မှုသည် ၃၀ အဲန်တီယူ ရှိပြီး SODIS နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
“sOdis” စာသားကို ဖတ်၍မရပါက ရေ၏ကြည်လင်မှုသည် ၃၀ အဲန်တီယူ ကျော်လွန်နေပြီး SODIS နည်းလမ်းကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ၊ ရေကို ဦးစွာစစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပုံ-၄ ရေကြည်လင်မှုတိုင်းရန် လိုဂို
၂.၆ ရေထည့်ရန်ပုလင်း(သို့) ရေသန့်ဘူးအကြည်
ဒုတိယအနေဖြင့် အသုံးပြုမည့် ပုလင်းသည် ကြည်လင်သောရေသန့်ဘူးအခွံ (PolyEthylene Terephtalate or PET ပလတ်စတစ်ကို အသုံးပြုသောရေသန့်ပုလင်းခွံ၊ မြင်တွေ့နေကျ ၁ လီတာ ဝင်ရေသန့်ဘူး အကြည်) ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိင်ပါသည်။
ပုံ-၆ PET ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရေသန့်ဘူးအကြည်
အခြားပလတ်စတစ်၊ ပီဗွီစီ (PVC) စသောပုလင်းများကို မသုံးသင့်ပါ၊ မြန်မာပြည်ရှိ ရေသန့်ဗူးအကြည် အများစုမှာ ပီအီးတီ(PET) ဖြင့်သာပြုလုပ်ထားပါသည်၊ မသေချာလျင် ပုလင်းဖင်တွင် ပီအီးတီ(PET) အမှတ်တံဆိတ် ပါမပါ ပုံ-၇ အတိုင်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ပုံ-၇ PET လိုဂို နှင် ရေသန့်ဘူးအောက်ခြေရှိ PET တံဆိတ်
ဖန်ပုလင်းများသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဖြတ်သန်းနိုင်မှု နည်းသောကြောင့် (ပုံမှန်ဖေါက်ထွင်းမြင်ရသော ၂ မီလီမီတာအထူ ပြတင်းပေါက်မှန်သည်ပင်လျင် ခရန်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ရာနှုံးပြည့် တားဆီးနိုင်ပါသည်) SODIS နည်းလမ်းတွင် အသုံးပြုရန် မသင့်တော်ပါ၊ အခြား သလင်း စသောဖန်ပုလင်းပါးများ (Pyrex,Corex, Vycor, Quartz) ရှိသော်လည် အလွယ်တကူမရရှိနိုင်သောကြောင့် မညွှန်းလိုပါ။
ကြည်လင်သောပုလင်းခွံကိုသာ သုံးပါ၊ ခြစ်ရာအစင်းများပါသော ပုလင်းခွံ၊ မဲညစ်ပါတ်သော ပုလင်းခွံများကို မသုံးပါနှင့်၊ ဖြစ်နိုင်သရွေ့ အဖြူရောင်ပုလင်းခွံကိုသာ သုံးပါ။
ပုံးကြီးများ၊ပုလင်းကြီးများ ကို မသုံးပါနှင့်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် ရေထု ၁၀ စင်တီမီတာ (၄ လက်မ) ထက်ထူပါက ရောင်ခြည်ဖြတ်သန်းနိုင်မှု ၅၀% ထိကျဆင်းသွားပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ပုံမှန်ရေသန့်ဘူး များသည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။
(၃) နေရောင်ဖြင့်ရေကိုပိုးသတ်ခြင်း (SODIS) ကို အသုံးပြုပုံ
နည်းလမ်းမှာ အလွန်ရှင်းသည်၊ ရေကိုပုလင်းထဲထည့်ပြီး နေလှန်းရန်သာဖြစ်သည်။
၁) နေရောင်နှင့်ရာသီဥတု အခြေအနေကိုကြည့်ပါ၊ နေသာရန်၊နေပူရန် လိုသည်။
၂) ပုလင်းကို ပထမဆုံးအချိန်အသုံးပြုလျင် ဆပ်ပြာဖြင့် အတွင်းအပြင် သေချာဆေးပါ။
၃) ရေကို ပုလင်း၏ ၃/၄ ပုံဖြည့်ပါ။
၄) ရေပုလင်းကို ၂၀ စက္ကန့် လှုပ်ပေးပါ။
၅) ရေပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီး ပုလင်းဖုံးကိုလုံအောင် ပိတ်ပါ။
၆) ပုလင်းကို နေရောင်နေ့တစ်ဝက်ခန့်ရသောနေရာတွင် အနည်းဆုံး ၆ နာရီကြာအောင် နေလှန်းပါ၊ အိမ်တံစက်မြိတ်၊ သွတ်မိုးစွန်း၊ တလင်းပြင်များသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်းနေလှန်းရန်အချိန်ကို ဇယား-၁ တွင်ကြည့်ပါ။
၇) နေလှန်းပြီးရေကို စိတ်ချစွာသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
နေကျက်ကျက်တောက်ပူ၍ နေရောင်အာက်တွင် ရေအပူချိန် ၅၀° စင်တီဂရိတ် ရှိလျင် ၁ နာရီ သာ နေပြရန်လိုသည်။
ကောင်းကင်၏ တစ်ဝက်တိမ်ရှိလျင်၊ ၅၀% နေသာလျင် ၆ နာရီ နေပြရန်လိုသည်။
ကောင်းကင်၏ တစ်ဝက်ကျော်တိမ်ထူလျင်၊ ၅၀% နှင့်အောက်သာ နေသာလျင် ၂ ရက်ဆက် နေပြရန်လိုသည်။
မိုးဆက်တိုက်ရွာလျင် နေရောင်ကောင်းစွာမရလျင် မိုးရေခံသုံးခြင်း၊ ကျိုချက်ခြင်း၊ ဆေးခတ်ခြင်း နည်းလမ်းများကို သာလျင် အသုံးပြုပါ။
အချိန်ပို၍ နေပြခြင်းသည် ပြသာနာမရှိ၊ မလုံလောက်ခြင်းသာလျင် ပြသာနာရှိသည်။
ဇယား-၁ ရာသီဥတုနှင့်နေရောင်ခြည်ပြရန်အချိန်၃.၁ နေရောင်ခြည်နှင့်ပိုးသတ်ခြင်းအတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ
ရေ ၃/၄ ပုံသာဖြည့်ပြီး ပုလင်းကိုလှုပ်ခြင်းသည် ရေနှင့်အောက်စီဂျင် ဓါတ်ပြုခြင်းကို အားပေးရန်ဖြစ်သည်။
လှုပ်ပြီးလျင် ရေအပြည့်ဖြည့်ပါ၊ ပုလင်းထဲတွင်လေ မကျန်ပါစေနှင့်၊ ပုလင်းထဲရှိလေပူပေါင်းများ၊ အပူရှိန်ကြောင့် ဖြစ်လာသော ရေငွေ့များသည် နေရောင်ခြည်ဖြတ်သန်းနိုင်မှု ကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေပါသည်။
ရေနောက်ကျိလေ စွမ်းဆောင်ရည် (ပိုးမွှားသတ်နိုင်စွမ်း) ကျဆင်းလေဖြစ်သည်။
SODIS ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် နေရောင်ခြည်ပေါ်တွင် များစွာမူတည်သည်၊ နေပူလေ ကောင်းလေ ဖြစ်သည်။
အရောင်ပါသောပုလင်း၊ အစင်းများစွာထင်၊ ညစ်ပေသွားသော ဆေးကြောမရတော့သော ပုလင်းများအား ဆက်လက်မသုံးပါနှင့်။
ပုလင်းကြီးတိုင်းမကောင်းပါ၊ သက်သာလို၍ ပုလင်းကြီးများကို မသုံးပါနှင့်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိရောက်မှု သည် ရေထု ၄” ခန့်ထိသာထိရောက်မှုရှိ၍ ပုလင်းကြီးလျင် ပိုးမွှားများ အားလုံးသေမည်မဟုတ်ပါ။
ပုလင်းကို ထောင်၍ နေမလှန်းပါနှင့်။
ပုံ-၉ SODIS ကို စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းစေသော အချက်များ
ကြည်လင်သောရေသည် ပိုးမွှားသတ်နိုင်ခြေ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပုလင်းကိုနေရောင်ခြည်နှင့်တိုက်ရိုက်တွေ့သော ဧရိယာများများရအောင် နေရောင်ဖက်သို့ စောင်း၍သော်လည်းကောင်း၊ ရေပြင်ညီသော်လည်းကောင်း ထားပါ၊
သွတ်ပြားကဲ့သို့သော အရောင်ပြန်သည့် ပစ္စည်းကို ပုလင်းအောက်တွင်ခံထားပါ၊ အရောင်ပြန်စက္ကူများကို ရောင်ပြန်ခွက်များ ပြုလုပ်၍ ပုလင်းကို အထဲတွင်ထားပါ၊ နေရောင်ခြည်ဓါတ်နှင့် အပူချိန် ပိုမိုရရှိခြင်းသည် ပိုးသတ်စွမ်းဆောင်ရည် ကို တိုးတက်စေပါသည်။
ရေပူနေ၍ ချက်ချင်းမသောက်နိုင်လျင် သန့်ရှင်းသောအိုး၊ခွက်တွင် တစ်ည အအေးခံပြီးသောက်နိုင်ပါသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်၍ ပုလင်းမရနိုင်လျင် ပလပ်စတစ်အိတ် အကြည်များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင် ပါသည်၊ အိတ်အထူကို ၄ လက်မ ထက်မကျော်အောင် ရေအိတ်ကို အပြားလိုက်ချပါ။
နေရာင်ခြည်မရလျင် မိုးရေကဲ့သို့သော ရေအရင်းအမြစ်ကိုသာ စုဆောင်း၍သုံးပါ။
ပုံ-၁၀ SODIS ကို ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စေသော အချက်များ
(၄) နေရောင်ဖြင့်ရေကိုပိုးသတ်ခြင်း (SODIS)၏ ရလာဒ်များ
နေရောင်နှင့် အပူရှိန်သည် အဓိကအကျဆုံးဖြစ်ပြီး နေရာဒေသနှင့် ပါတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရ ရလာဒ် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သော်လည်း မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းဒေသများသည် ဤနည်းလမ်းနှင့်အထူး သင့်တော်ပါသည်။
နေရောင်ခြည်သည် အပူရှိန်ထက် အရေးပါသည်၊ ရာသီဥတုအေး၍ လေတိုက်ခတ်နေသော တရုတ်နှင့် ဘိုလီးဗီးယား တောင်ပေါ်ဒေသများတွင် စမ်းသတ်ခဲ့ရာ နေရောင်ခြည်ရလျင် အပူပိုင်းဒေသများအလားတူ ပင် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိထားပါသည်။
မြန်မာပြည်၏ ဒေသအားလုံးနီးပါးသည် တစ်ရက်လျင် ၅ နာရီ ပျမ်းမျှ နေရောင်ခြည်ရရှိသည်၊ ပျမ်းမျှ ၁ ရက်စာ(၅ နာရီ )အတွက် ၁ m2 ဧရိယာအတွက် နေရောင်မှ ပါဝါရရှိမှုသည် ၂.၃~၅ ကီလိုဝပ် ဖြစ်ပါသည်၊ SODIS အတွက် နေရောင်ခြည်လိုအပ်မှုမှာ ၁ m2 ဧရိယာတွင် ၆ နာရီအတွက် ၅၀၀ ဝပ် ဖြစ်၍ မြောက်ပိုင်းစွန်း ဒေသများမှ လွဲ၍ နေရာဒေသ တော်တော်များများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
ပုံ-၁၁ လအလိုက်နေရောင်ခြည်ရရှိမှုနှင့်စွမ်းအင်ထွက်ရှိနိုင်ခြေ ( from MGES)
အရောင်ပါသောရေ (သို့) အရောင်ပါသောပုလင်းသည် နေရောင်ပြချိန် ပိုမို၍ ပေးရန်လိုအပ်သည်။
၁၉၉၁ မှ ၂၀၀၁ အတွင်း ပီရူး၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဟွန်ဒူးရပ်၊ အီကွေဒေါ နိုင်ငံများတွင် ရေနမူနာ ၁၁၇ ကြိမ် ယူခဲ့ပြီး လက်တွေ့စမ်းသတ်ချက်များအရ ဤနည်းလမ်းဖြင့် ပိုးမွှားဖယ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၉၉.၉% ဖြစ်ပါသည်။
ပိုးသတ်ရာတွင် သုံးသောပုလင်းသာမက သောက်သုံးသော၊ သိုလှောင်သော ပုံး၊ ခွက်များပါ ပိုးမွှားသန့်ရှင်း မှသာ အကောင်းဆုံး ရေသန့်ကို ရပါမည်၊ စမ်းသတ်ချက်အချို့တွင် ရေကို ရွှေ့ပြောင်း သိုလှောင်လျင် ပိုးမွှားပါဝင်မှု ပိုမိုမြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ပုလင်းဖုံးနှင့် အရစ်များ ညစ်ပေနေလျင် ပိုးမွှားပါဝင်မှုကို မြင့်တက်စေသဖြင့် သေချာဆေးကြောပေးရန် လိုအပ်သည်။
ရေ၏အရည်အသွေး ပိုးမွှားပါဝင်မှုကို တိုင်းတာရာတွင် ဖီကယ်ကိုလီဖောင်း (Fecal Coliform Test) သည် အရေးပါပြီး အလွယ်တကူ စမ်းသတ်နိုင်သော နည်းဖြစ်ပါသည်၊ ဖီကယ်ကိုလီဖောင်း (Fecal Coliform) ဆိုသည်မှာ လူ၊တိရစ္ဆာန် တို့၏ အစာဟောင်း လမ်းကြောင်းတွင် ခိုအောင်းလေ့ရှိသည် ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် လူတို့ကို ဒုက္ခပေးလေ့ မရှိပါ၊ သို့သော် ရေတွင် Fecal Coliform ပါဝင်မှု သည် အခြားရောဂါပိုးမွှားပါ ရှင်သန်နိုင်ခြေနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်၊ အခြား ရောဂါပိုးမွှားများကို စမ်းသတ်ခြင်းမှာ ပိုမိုရှုတ်ထွေးသဖြင့် ရေတွင်ပိုးမွှားပါဝင်မှုပမာဏကို ဖီကယ်ကိုလီဖောင်း အရေအတွက်ဖြင့် တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ တနည်းအားဖြင့် ရေတွင် Fecal Coliform များလျင် အခြား အီကိုလိုင်၊ ဝမ်းကိုက်ပိုး၊ အသည်းရောဂါပိုး စသည့် ရောဂါပိုးမွှားများ ပါဝင်နှုံး များပြီး ဖီကယ်ကိုလီဖောင်း နည်းလျင် ယင်း ရောဂါပိုးမွှားများ နည်း သည်ဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဇယား-၂ တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး(WHO)၏ ဖီကယ်ကိုလီဖောင်းပမာဏ သတ်မှတ်ချက်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်၊ ပုံ-ထ မှာ မသန့်စင်ရသးသောရေကို ၄၄° စင်တီဂရိတ် နေရောင်အောက်တွင် ထားပြီး ဖီကယ်ကိုလီဖောင်း ပမာဏ ကို ရေတွက်ထားသော ပုံဖြစ်ပါသည်။
ဇယား-၂ ရေတွင်ပါဝင်သော ဖီကယ်ကိုလီဖောင်း နှင့် အန္တရယ်ရှိမှု အခြေအနေ
၁၀၀ မီလီလီတာတွင် ပါဝင်သော ဖီကယ်ကိုလီဖောင်း အရေအတွက် (Nos of Fecal Coliform per 100 ml) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
၀ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး(WHO)၏ သောက်ရေသန့် သတ်မှတ်ချက်
၁ မှ ၁၀ ရေတွင်ပိုးမွှားပါဝင်မှုအန္တရယ် နည်းပါး
၁၀ မှ ၁၀၀ ရေတွင်ပိုးမွှားပါဝင်မှုအန္တရယ် အလယ်အလတ်
၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ ရေတွင်ပိုးမွှားပါဝင်မှုအန္တရယ် မြင့်မား
၁၀၀၀ အထက် အန္တရယ်အလွန်ရှိ
ပုံ-၁၂ နေရောင်ခြည်ပြချိန် နှင့် ဖီကယ်ကိုလီဖောင်း ပမာဏ
အောက်ပါဇယား-၃ တွင် သန့်စင်လိုသည့်ရေအား ၄၀ံ နေရောင်ခြည်တွင် ၆ နာရီထားပြီး ပိုးမွှားကင်းစင်မှု အခြေအနေကို တွေ့နိုင်ပါသည်၊
ဇယား-၃ ပိုးမွှားများနှင့် ဖယ်ရှားနိုင်သည့် အခြေအနေ
ရောဂါပိုးမွှားများ(Pathogen ) ရောဂါသက်ရောက်မှု (Illness) ၄၀ံ နေရောင်ခြည်တွင် ၆ နာရီထားပြီး ပိုးမွှားကင်းစင်မှု အခြေအနေ
(Reduction trough SODIS 6h, 40°C)
E. coli Indicator for Water Quality & Entetritis > 99.999%
Y. enterocolitica Diarrhoea
S. typhi Typhoid
Sh. Flexneri Dysentery
Rotavirus Diarrhoea, Dysentry 99.9 – 99.99%
Polio Virus Polio 99.9 – 99.99%
Hepatitis Virus Hepatitis Reports of cases of SODIS users
Giardia spp. Giardiasis Cystes rendered noninfective
Cryptosporidium spp. Cryptosporidiasis Cystes rendered noninfective only after >10h exposure
Amoeba spp. Amoebiasis 1h above 50°C inactivates cysts
(၅) နေရောင်ဖြင့်ရေကိုပိုးသတ်ခြင်း (SODIS)၏ အားနည်းချက်များ
၁) နေရောင်ခြည် ကောင်းစွာမရလျင် အလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ (ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမြန်သော ဒေသများတွင် နည်းလမ်းတစ်ခုထဲ အသုံးမပြုနိုင်ပါ)
၂) စစ်မည့်ရေသည် ကောင်းစွာဖေါက်ထွင်းမြင်ရသည့် ရေကြည်ရန်လိုအပ်သည်၊ အနယ်များသော နောက်ကျိသောရေများတွင် ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါ။
၃) ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော ဓါတုပစ္စည်းများကို မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
၄) တစ်ပုလင်းချင်းသာ သန့်စင်ရသဖြင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်သာ အသုံးချနိုင်ပြီး အမြောက်အများ သန့်စင်ခြင်းအတွက် အသုံးမချနိုင်ပါ။
နေရောင်ခြည်ဖြင့် သောက်သုံးရေကို ပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်း (Solar Water Disinfection) သည် လွယ်ကူသလောက် အလွန်ထိရောက်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်၊ ကုန်ကျစရိတ်လည်း မရှိသလောက်နီးပါးဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတု အခြေအနေ နှင့်လည်း ကိုက်ညီလှပါသည်။ အပိုင်း(၁) တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သော ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter) နှင့်တွဲဆက် အသုံးချနိုင်ပြီး ရပ်ရွာ တနိုင်တပိုင်စီမံကိန်းများအဖြစ် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်အောင် ရပ်ရွာအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO, NPO များ မှ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လျင် မိုးနည်းရေရှားဒေသများတွင်သာမက သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်ရာ ဒေသများတွင်ပင် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ ပြေလည်နိုင်ပါသည်။
အပိုဆုအနေဖြင့် အာဖရိကကဲ့သို့ဒေသများတွင်ပင် သန့်စင်သောရေ ရရှိလာပြီးနောက် လက်ဆေးခြင်း (Hand Washing) ကဲ့သို့ စီမံကိန်းများကိုပင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီး လူထုကျန်းမာရေးအဆင့် မြှင့်တင် လာနိုင်သည့် သာဓကများ ရှိပါသည်။
လက်တွေ့အသုံးချနေသူ တည်ဆောက်သူများမှလည်း မိမိတို့၏ တွေ့ရှိချက်များ ကို ပြန်လည်မျှဝေ ကြပါရန်နှင့် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများ၊ လေ့လာသူများမှ နည်းလမ်းများကို အကြံပြုပြသရှင်းလင်းပေးကြပါရန်၊ တက္ကသိုလ်ကောလိတ်များမှ ကျောင်းသား/သူများ၊ Researcher များအနေနှင့်လည်း Field တစ်ခုအနေနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် (မူရင်းနည်းပညာမှာ လက်ဘနွန် တက္ကသိုလ်တစ်ခု၏ research ဖြစ်ပါသည်) မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။
All data, documents, photos and images owners which used in this document
Original developer, researcher, owners and organization who developed, shared, adapted, referenced for this document
ဤလမ်းညွှန်အား Download ရယူရန်
Document Version Revision Date Revised By
1.1 17 August 2015 Oak Kar
SODIS လမ်းညွှန် (SODIS manual )
SODIS သင်တန်းလက်စွဲ (SODIS Training Manual )
SODIS ပန်းဖလက် (SODIS flyer )
SODIS ပိုစတာ (SODIS Poster )
SODIS နှင့် ရေကြည်လင်မှု ဆက်သွယ်ချက် (SODIS and Turbidity Depth)
ရေကြည်လင်မှုတိုင်းတာခြင်း (Turbidity test tube)
Copyright © by SANDEC (Water & Sanitation in Developing Countries) at
P.O.Box 611, Ueberlandstr.133
tel: +41- 1- 823 5286
fax:+41- 1- 823 5399
Permission is granted for reproduction of this material, in whole or part,
for education, scientific or development related purposes except for those
involving commercial sale, provided that
– full citation of the source is given
– written request is submitted to SANDEC
Distributor: Swiss Centre for Development Cooperation in Technology
and Management (SKAT)
fax: +41- 71- 228 5455
tel: +41- 71- 228 5454
Intermediate Technology Development Group Publishing (ITDG)
This guide has been written by Regula Meierhofer and Martin Wegelin, in close collaboration with Xiomara del Rosario Torres, Bruno Gremion, Alvaro Mercado, Daniel Mäusezahl, Michael Hobbins, Stephan Indergand-Echeverria, Beat Grimm and Christina Aristanti
Clean WaterGreen Energy MyanmarSODIS Myanmar